Daawo Sawiradda: Madaxweynaha maamulka Puntland oo khudbad ka jeediyay shirka arrimaha Afrika looga hadlayo ee ka dhacay magaalada Bahir Dar. – idalenews.com
Magaalada la yiraahdo Bahir Dar ee Dalkaasi Ethiopia waxaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday shir looga hadlayo amuuraha Africa iyadoona ay kasoo qayb galeen hoggaamiyaal ka socda qaar ka mid ah dalalka Africa.
Dalka Soomaaliya waxa shirka uga qayb galay madaxwaynaha Puntland Dr.Cabdiwali Maxamed Cali (Gaas) Khudbad uu shirka ka jeediyayna wuxuu tilmaamay xaalada dalka Somalia inay soo hagaagayso balse loo baahan yahay in xili kasta la muujiyo garab istaaga Somalia maadama ay dagaalo wajiyo kala duwan-le ay Alshabab oo qeybo kamid ah Soomaaliya ka dagaalama.
Madaxwayne C/wali Gaas ayaa sidoo kale soo hadal qaaday xaalada Puntland iyo sida ay uga nabadgalleen dhibaatooyinka kooxda Alshabab,Gaas ayaa tilmaamay inay shacabka iyo dowladooda ay isku xiran yihiin isla markasna ay habeen iyo maalin ka wada shaqeeyaan hormarka iyo nabadgalyada Gobalka.
Inta u shirku socday waxaa madaxdii ka qayb galay ay soo jeediyeen talooyin ku aadan xaalada dalalka Africa iyo sidii hormarka iyo isku xirnaanta looga wada shaqayn lahaa.
Wafdiga uu hoggaaminayay madaxwaynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dib ugu laabtay magaalada Addis-Ababa,waxaana lagu wadaa inay dib ugu soo laabtaan Puntland, gaar ahaan caasimadda maamulka ee Garoowe.
Idale News Online, Bahir Dar, Eithiopia.